Rivo Rakotovao - « Restons dans le cadre légal »
Ny fanarahan-dàlana no fepetra iray tena takiana amin’ny mpitondra. Rariny raha maneho ohatra tsara amin’ny hafa izy izany.
Ny fahavononana dia efa feno ny azy fa miandry fotoana sisa. Ny asa koa tsy maintsy tohizana izay mifanaraka @ lalàna misy ihany nefa.
efa hiaraha mahita fa maro ireo mpanenjika sy ireo mpandika lalàna mba hanatontosana korontana hoentina handravana ny fifidianana satria efa mitoetra ao aminy ilay toetsaina fahavalom-pirenena. Isika hoa tokony miala amin’ny izany toetra voazanaka izany.
HIta fa vonona tokoa izy andray an-tanana ny fitondrana mandrapijoron’ny fitondrana vaovao. Marina no lazainy ary fietsika modely azo alain-tahaka.